ကျွန်တော်သိသော တရံရောအခါများ | MoeMaKa Burmese News & Media
မေလ ၁၊ ၂၀၁၂
စာအုပ်အမည် – ကျွန်တော်သိသော တရံရောအခါများ
စာရေးသူ – ကိုကိုမောင်ကြီး
ကိုကိုမောင်ကြီးစာအုပ်ကို ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပြီး ကောက်နုတ်ရရင် ….
၁။ မျက်စိဆရာဝန်ဝန်ကြီးဦးသန်းမောင်၊ စာရေးဆရာမဒေါ်ကြွယ်ကြွယ်၊ သမီး။ တူမ ကိုအေးသိန်း-မအေးချို၊ ဗမကစောမြင့် (မဟေသီ)၊ မြတ်ထန် (ဗမကတင်မောင်)၊ မိုးမိုးတာရောစန် (ဗခက ခင်မောင်သောင်း) တို့ကို ကျေးဇူးတင်စကား ရေးထားပါတယ်။
၂။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ ၁၉၆၂ မှာ ဗိုလ်မှုးကြီးသန်းစိန် (စစ်ဦးစီ ဗမက)၊ ပြည်တဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စိုး (စစ်ရာထူးခန့် အတွင်း ၀န်) တော်လှန်ရေးကောင်စီ ၁၇ ဦးမှာ အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ခံ ၈ ဦး (၀န်ကြီးရာထူး) ရှိပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက (၃) ခု၊ ကာကွယ်ရေး၊ အခွန်၊ တရားရေး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီးက (၂) ခု၊ ဦးစောမြင့် (၂) ခု၊ ဦးတင်ဖေ (၂ခု)၊ ဦးသီဟန် (၃) ခု၊ ဦးကျော်စိုး (၂) ခု၊ ဦးသန်းဖေ (၁) ခု၊ ဦးဘနီ (၁) ခု တာဝန်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
၃။ စာရေးသူ ကိုကိုမောင်ကြီးဟာ ရင်းနှီတဲ့ ဗိုလ်မှူးကိုကိုပြောပြချက်များကို ကိုးကားပြီး၊ ဦးနေ၀င်းနဲ့နီးစပ်ပြီး အရေးပါရာထူးကိုယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ် မှူး ကြီးစောမြင့်များကို ညွှန်းပြီးရေးသားထားပါတယ်။
၄။ ၁၉၆၂ ခု၊ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး တနှစ်ကျော်မှာ ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မြေလှန်ပစ်မဲ့ ပြည်သူပိုင်သိမ်းဥပဒေနဲ့နညးဥပဒေကို ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ ဦးဘငြိမ်းက ဦးနေ၀င်း စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲပြီး၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင်များကို ခေါင်းငြိမ့်အတည်ပြုစေခဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အစပျိုးခဲ့ပါတယ်။ (စာမျက်နှာ ၈၂၁)
၅။ ဦးနေ၀င်းနဲ့ ဦးတင်အောင်ဟိန်း ၂ ယောက် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း အနားယူသွားတဲ့ဦးနေ၀င်းကို သွားတွေ့တဲ့အခါ၊ ဦးနေ၀င်းပြောစကားတခုက .. ကိုယ်လူတွေနဲ့ ကြုံတုံး ပြောပြရဦးမယ်။ သံသရာ၊ သိင်္ခါရ၊ အနတ္တတရားတွေ အခုသိခဲ့သလို၊ သိခဲ့ရင် ၁၉၆၂ ခုကိစ္စကို ကိုယ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး.. ဟု ပြောခဲ့ပါတယ်။ (စာမျက်နှာ ၇၆၂)
၆။ ဒုကာချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးဟာ အာဏာသိမ်းပြီး နောက်တနေ့၊ အိပ်ရာနိုးချိန် အာဏာသိမ်းကိစ္စကိုမသိတဲ့ မျက်နှာပုံပန်းကို မြင် ခဲ့ရကြောင်းကိုရေးခဲ့ပါတယ်။ (စာမျက်နှာ ၇၀၈)။ စာရေးသူဆိုလိုတာက ဦးအောင်ကြီးဟာ အာဏာသိမ်းပြီး လအနည်းငယ်အကြာ စစ်ရာ ထူးမှအနားယူရသူဖြစ်ပြီး၊ ရာထူးသာရှိပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသူဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုပါတယ်။
၇။ ၁၉၆၂ခု အားဏာသိမ်းပြီး ပထမဆုံး အသိမှတ်ပြုသ၀ဏ်လွှာပို့ခဲ့သူက လောနိုင်ငံခေါင်းဆောင် Phumi ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနေ၀င်းက အာ ဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်အများကို ပြောစကားက အလွန်အာဏာရှင်ဆန်ပါတယ် .. “ကိုယ့်ကို Congratulate လုပ်တယ်တဲ့ဗျာ။ …. “ဟု ပြောဆိုပြီး အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်များ (နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ) မျက်စေ့ရှေ့တွင် ထိုသ၀ဏ်လွှာကို လုံးချေလွှင့်ပစ်ပြလိုက်ခြင်း၊ အာ ဏာ သိမ်း နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်များ ဦးနေ၀င်းနှင့်အတူ ၀ိုင်းဝန်းရယ်မောကြခြင်း၊ စာရေးသူ ကိုကိုမောင်ကိုယ်တိုင်ကလည် ထိုစဉ်က အတူရယ်မောလိုက်မိသည်ကို နောင်တရမိကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။ (စာမျက်နှာ ၇၁၉)
၈။ ဦးနေ၀င်း ကိုယ်ရေးဘ၀ကို စာရေးသူချစ်လှိုင်တွင် တာဝန်မရှိ ဟုဆိုကာ မရေးသားပါ။ ရွှေဘိုမုဆိုးခြုံမှာ ဗိုလ်တွန်နှင့် ဆွေမျိုးဆက်စပ်သလို ရေးသားထားသည် (စာမျက်နှာ ၈၄၄)၊ စာရေးသူ ကိုကိုမောင်သည် မ.ဆ.လ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကို ဦးနေ၀င်းနှင့်အတူ တည် ထောင်ခဲ့ခြင်းကို လက်ရှော့ဟန်မတူသည့် ပုံစံရေးထားပါသည်။ ဦးနေ၀င်း၏နိုင်ငံရေးဘ၀ကို သူ့ဆရာသမားအနေဖြင့် ရေးသားထားပါ သည်။ (စာမျက်နှာ ၈၃၀)
၉။ ဦးနေ၀င်းအကြောင်းများကို ထပ်မံကိုးကားရေးသားရာတွင်၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်စာအုပ်၊ ဦးနေ၀င်း၏ညီဖြစ်သူ ဦးသိန်းညွှန့် ပြောစကားများ “နာစရာရှိလျှင် လွမ်းစရာတွေနဲ့ပေါ့” ဟုလည်းကောင်း၊ ဖ.ဆ.ဖ.လ ဦးကျော်ငြိမ်းကိုလည်း ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြောင်းများကို ရေးသားထားပါသည်။ (စာမျက်နှာ ၈၈၄၊ ၈၉၆)
၁၀။ ဦးနုအကြောင်းကို သူ့အမြင်ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ စာရေးသူကိုကိုမောင် တွေ့ဆုံရသူများတွင် (၆) ဦးကို အမွှမ်းတင်ရေးသားကာ စာအုပ်ကို အဆုံးသပ်ထားပါသည်။ ထို ၆ ဦးမှာ သခင်စိုး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း၊ ဦးအောင်ကြီး၊ ဦးဗဆွေ၊ ဦးသိန်းဖေမြင့် တို့ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ (စာမျက်နှာ ၈၉၇)
စာမျက်နှာ ၉၀၀ ထူထဲလှသော စာအုပ်တွင်၊ ဦးနေ၀င်း (စစ်အာဏာရှင် အစပျိုးသူ) အတွက် ရာထူးကြီးမယူပဲ၊ အမှုဆောင်ပေးခဲ့သူ ဦးချစ်လှိုင် (ကလောင်အမည် ကိုကိုမောင်ကြီး) ၏ဘ၀ဖြစ်စဉ်သည် စိတ်ဝင်စားစရာ မရှိလှသော်လည်း၊ ဦးနေ၀င်းအကြောင်း အနည်းငယ်ရေးသား ထားသည့်အတွက် .. နောင်မြန်မာပြည်တည်ထောင်မည့် ခေါင်းဆောင်သစ်များ၊ အာဏာရှင်စရိုက်များကို ခ၀ါချရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရေး အတွက် အကျဉ်း ကောက်နုတ်ရေးသားလိုက်ပါသည်။